Abavelisi bezixhobo zamachiza kunye nababoneleli - China izixhobo zoMveliso zeMveliso
I-Vial ulwelo lokugcwalisa ulayini wokuvelisa lubandakanya umatshini wokuhlamba we-ultrasonic, i-RSM yokucoca umatshini wokomisa, ukugcwalisa kunye nokumisa umatshini, umatshini we-KFG / FG. Lo mgca unokusebenza kunye nangokuzimeleyo. Inokugqibezela le misebenzi ilandelayo yokuhlamba i-ultrasonic, ukomisa kunye nokubulala iintsholongwane, ukugcwalisa kunye nokumisa, kunye nokubamba.
Isirinji egcwaliswe kwangaphambili luhlobo olutsha lokupakishwa kweziyobisi ngo-1990. Emva kweminyaka engama-30 yokwazisa nokusetyenziswa kwayo, idlale indima enkulu ekuthinteleni ukusasazeka kwezifo ezasulelayo kunye nophuhliso lonyango. Iisirinji ezizalisiweyo zisetyenziselwa ikakhulu ukupakisha kunye nokugcina iziyobisi ezikumgangatho ophezulu kwaye zisetyenziselwa ngokuthe ngqo inaliti okanye utyando lwamehlo, i-otology, i-orthopedics, njl.
Umgca wemveliso yethu yePeritoneal Dialysis Solution, enobume beCompact, ethatha indawo encinci. Kwaye idatha eyahlukeneyo inokuhlengahlengiswa kwaye igcinelwe ukuwelda, ukuprinta, ukugcwalisa, i-CIP kunye ne-SIP njengobushushu, ixesha, uxinzelelo, nayo inokuprintwa njengoko kufuneka. Eyona drive iphambili idityaniswe yimoto ye-servo kunye nebhanti ehambelanayo, indawo echanekileyo. Imitha yokuhamba kobunzima obuphambili inika ukuzaliswa ngokuchanekileyo, ivolumu inokuhlengahlengiswa ngokulula kukujongana komatshini nomntu.
Izixhobo zethu ziqinisekisa ukusebenza ngaphandle kwengxaki, kuncitshisiwe iindleko zolondolozo kunye nokuthembeka kwexesha elide.
Imveliso yeebhegi ezithambileyo ezingezo-PVC ngumgca wemveliso yamva nje ngobuchwephesha obuphezulu. Inokugqiba ngokuzenzekelayo ukondla ifilimu, ukuprinta, ukwenza ibhegi, ukugcwalisa nokutywina kumatshini omnye. Inokukubonelela ngoyilo lwebhegi ezahlukeneyo ngolunye uhlobo lwesikhephe, izibuko elinye / elinzima, amazibuko etyhubhu ethambileyo kabini njl.
Umatshini ozalisiweyo-weSirinji, Umatshini weAmpoule À iCoudre Led, Umatshini we-Ampoule À uCoudre Singer, Isirinji elahlwayo kunye neNaliti yokuvelisa umgca, Umatshini weAmpoule À uCoudre Bernina, Umatshini wokugcwalisa weSirinji ozalisiweyo,